सरकारले फेरी १८ दिन लकडाउन गर्ने ? सहि कि गलत – AB Sansar
सरकारले फेरी १८ दिन लकडाउन गर्ने ? सहि कि गलत
September 29, 2020 Ab-संसारLeaveaComment on सरकारले फेरी १८ दिन लकडाउन गर्ने ? सहि कि गलत
समितिको बैठकले बढिमा १८ दिन लकडाउन गर्नेगरी मोडालिटी तयार पारेको हो । मुख्यसचिव नेतृत्वको कार्यदलले मोडालिटी तयार पारेको जनाइएको छ ।
यद्यपी कहिलेदेखि मोडालिटी अनुसार लकडाउन गर्ने भन्ने टुङ्गो लागेको छैन् । ‘स्वास्थ्य मन्त्रालयले २५ हजार सक्रिय संक्रमित भनेका कारण त्यसको पेरिफेरीमा पुगेपछि मोडालिटीको विषयमा थप छलफल होला’ स्रोतले भन्यो ।
थकाली रेस्टुरेन्टमा खाना पकाएर खुवाउने कुक आज आफै आँसुले भात मुछेर खाइरहेका
शारीरिक अपाङ्गता भएकाहरू पनि ‘ग्ल्यामरस’ देखिनुपर्छ
April 7, 2021 April 7, 2021 Admin01
युट्युबमा आउँदै नयाँ फिचर : डिसलाइकको संख्या नदेखिने
मेरो परिवारले गरेको संघर्ष नदेख्ने, पद पाएको मात्र देख्ने”
October 13, 2020 Ab-संसार